NRVNA | Coinfalls क्यासिनो
NRVNA भर मनोरंजन हुनेछ जो एक उत्कृष्ट ठाउँ र समय-आधारित विषय प्रयोग. यो हुन्छन् 30 paylines र5रील. यो हसाउने गेमप्ले तपाईं बारम्बार रील स्पिन बनाउन र flashy प्रतीक खेल मा तपाईं संलग्न हुनेछ.
तपाईंले यो खेल पाउनेछन् त्यसैले हाम्रो क्यासिनो मा मजा लागि खेल्न भूल छैन. तपाईं £ गर्न 50.00 को राशि depositing द्वारा Coinfalls क्यासिनो मा नि: शुल्क दर्ता र एक प्राप्त गर्न सक्छन् 200% बोनस मिलाउनु.
NetEnt यो शानदार रील खेल शीर्ष निशान ग्राफिक्स र मनोरम पृष्ठभूमि संगीत छ जो डिजाइन. NetEnt क्लासिक स्लट र क्यासिनो खेल गुणस्तर उच्च हो जो डिजाइन गरिएको छ र यो आफ्नो सबै भन्दा राम्रो खेल मध्ये एक छ.
NRVNA ठूलो चासो सिर्जना गर्नेछ जो र यो खेलको spins aesthetically सुन्दर छन् भव्य विषय छ. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA जस्तै आधार प्रतीक प्रयोग 10, जे, एक, K, र तपाईं x125 गर्न को multipliers तिर्न क्यू.
यो खेल मा मुख्य प्रतीक चार पात क्लोभर शामिल, नाल, चेरी, सेभेन्स, र Bells. यी प्रतीक तपाईं एक्स2गर्न को एक शानदार गुणक भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, 000. खेल जो स्क्याटर लोगो बाहेक रील मा सबै तस्बिरहरू विकल्प को गुलाबी फुटेर भित्र सेतो तारा को जंगली प्रतीक प्रयोग.
यो स्क्याटर लोगो सुन्तला बबल मा राख्यो सेतो हीरा छ र नि: शुल्क spins सुविधा क्रियाशीलता. तपाईं तितर-बितर तस्बिरहरू तीन समान प्रतीक मा जमीन भने तपाईं जीत सके 10 मुक्त spins र चार छरिन्छ तपाईं प्राप्त हुनेछ 15 मुक्त spins र5छरिन्छ तपाईं जीत हुनेछ 30 spins.
निःशुल्क spins को NRVNA पाङ्ग्रा सुविधा रूपबाट कताई बेला जहाँ तपाईं संग x10 को एक गुणक प्राप्त2अतिरिक्त निःशुल्क spins. खेल पनि तपाईं रील बडा जीत ट्रिगर हुनेछ जो स्पिन गर्न स्वचालित रूपमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ एक स्वतःप्ले मोड छ. त्यसैले फिर्ता बस्न र आराम. यो एक शानदार RTP आकर्षित 96.60%.
NRVNA मजा र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि एक कल्पना आधारित भिडियो स्लट छ. तपाईं स्लट को एक प्रेमी र एक शानदार स्लट खेलको लागि देख भने यो एक तपाईं निराश छैन. एउटा उल्लेखनीय स्वागत प्याकेज प्राप्त गर्न हाम्रो क्यासिनो मा नि: शुल्क दर्ता 200% अब हाम्रो क्यासिनो सामेल अप £ 50.00.Hurry गर्न को आफ्नो पहिलो जम्मा मा!